Nnukwu ụlọ na mpaghara Andalusia (I) | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Spain obodo, Córdoba, Huelva, Ihe ị ga-ahụ, Sevilla, njem
Ibi na Andalusia nwere ihe ùgwù, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụ gbasara ọdịdị ala na ebe ndị mara mma anyị nwere ezigbo nso na nso anyị. Ma ọ bụrụ na e nwere ihe jupụta na onye anyị hụrụ n'anya Andalusia, O doro anya na ọ bụ ụlọ ndị ahụ. Akụkọ mere ka ha bịakwute anyị ma anyị na-eme ihe niile iji chebe ha dịka nnukwu nrụpụta ha bụ.
N’isiokwu a taa, m bịara gosi ala m, na-eweta otu ụlọ dị na mpaghara Andalusia. Enwere m ike ịkọ ọtụtụ ihe, mana achọghị m ịkọ gị. Ndị a bụ 4 nke ụlọ 8 anyị ga-ekwu banyere ha n'isiokwu a, nke ọ bụla sitere na mpaghara, nke m họọrọ ka ị nwee ike ịmatakwu banyere ihe dị na ndịda Spain.
1 Nnukwu ụlọ nke Niebla, na Huelva
2 Alcazar nke Seville
3 Castlọ nke Almodóvar del Río, Córdoba
4 Nnukwu ụlọ Sancti Petri, na San Fernando (Cádiz)
Nnukwu ụlọ nke Niebla, na Huelva
Ọnwa ole na ole gara aga m wetara gị edemede na-ezo aka na ụlọ a, nke ị nwere ike ịgụ ebe a. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ka achikọta ihe banyere ya, gaa n'ihu na-agụ.
Niebla bụbu alaeze Taifa dị ike. Alaeze a, ka hapụrụ anyị taa, ụfọdụ mgbidi siri ike na nnukwu ụlọ nke, n'ụzọ dị ịtụnanya, wuru mgbe oge Reconquest gasịrị.
El Castillo de Niebla, ma ọ bụ nke a makwaara dị ka Lelọ nke Guzmanes ọ dị n'ime nnukwu ogige nke mgbidi Almohad malitere. N'ime mgbidi ahụ nwekwara ụlọ nke ndị bi na Niebla. Castlọ a lanarịrị ala ọma jijiji, nnọchibido ahụ a lụrụ n'oge Agha nke Onwe, na n'ezie, oge na-enweghị atụ. Ma mgbidi ya siri ike, ihe na-amasị ndị njem nleta na-eleta ya kwa ụbọchị.
Alcazar nke Seville
El Alcazar nke Seville Ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mkpa n'isi obodo Seville. E wuru nnukwu ihe owuwu a n'etiti Ọ bụ narị afọ nke iri na nke iri na atọ ọ ga-erukwa ịma mma ya kachasị ukwuu n'oge eze Pedro nke Mbụ, onye n'etiti narị afọ nke XNUMX nyere nnukwu ụlọ ahụ na ụda Mudejar nwere njirimara nke na a ka nwere ike ịhụ ya taa.
Alfonso X, ndị Katọlik Katọlik ma ọ bụ Carlos nke V, abụwo ụfọdụ n'ime ndị biri n'ime mgbidi ya na ndị obere obere na-emezigharị ihe ịchọ mma ya na ihe owuwu ya na arụmọrụ na ụtọ nke oge ọ bụla. Echiche a dịgasị iche iche ewetawo ezigbo ihe mbụ na nnukwu ụdị dịgasị iche iche.
O doro anya na ụlọ ga-ahụ ma ọ bụrụ na ị gafere Seville.
Castlọ nke Almodóvar del Río, Córdoba
Castlọ a nke mbido Alakụba, bụ wughachi ugboro ugboro y weghachiri na mmalite nke narị afọ nke XNUMX. O doro anya Othdị Gothic-Mudejar na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ egwu kachasị mma na Andalusia. Ọzọkwa n'ihi ọnọdụ nchekwa ya dị mma na inwe ezigbo ọdịdị nke ụdị akụkọ ifo ndị anyị niile na-eche.
Site na iguzo n'elu obodo, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ site na mgbidi ya echiche mara mma nke obodo Cordovan, yana, n'ezie, ịgagharị site na patio ya na paseeji ya ma nwee ike ịhụ ọmarịcha ụlọ elu ya: square , gburugburu na nkwanye ugwu.
Nnukwu ụlọ Sancti Petri, na San Fernando (Cádiz)
Nke a peculiar nnukwu ụlọ bụ a nchebe mgbidi emi odude ke isuo San Fernando, Cádiz. Gị nleta nwere ike ịbụ ihe pụrụ iche n'ihi na mgbe ị na-asa ahụ na mma ájá osimiri nke a magburu onwe obodo ị pụrụ ịhụ nke a oké ewu na n'akụkụ nke ọzọ. Ihe enwere ike ihu na ebe ole na ole ahọpụtara. Na ụlọ elu bụ ochie owuwu, ebe ọ bụ na ọ malitere site na 1610, na ndị ọzọ na-ewu ya, dị ka mgbidi na ime nke ogige ahụ, sitere na narị afọ nke XNUMX.
Ga ileta nnukwu ụlọ a nwere ike ịbụ ahụmịhe pụrụ iche, ọkachasị n’oge ọkọchị, ebe ọ bụ na enwere ụzọ osimiri na-apụghị ịgụta ọnụ na ileta ya n’ebe ahụ. Na mgbakwunye, obodo a bụ otu n'ime nnabata ndị m hụrụla.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịma ụlọ ezumike ndị ọzọ ahọpụtara n’isiokwu abụọ a, gụọ nke na-esote ya na otu aha. N'ime ya anyị ga-ekwu maka ụlọ 4 ọzọ, mana oge a na mpaghara Malaga, Granada, Jaén na Almería. Kedu nke ga-abu? Have nwere ọkacha mmasị gị? M na-eme, mgbe ahụ, m ga-eme ka ị mara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Otu nnukwu ụlọ na mpaghara Andalusia (I)
Ngwa 6 iji luso nrụgide nke efe efe
Ihe nzuzo nke ịzụ ahịa n’ahịa mepere emepe